Kaynta Bugoma waa in ay sii ahaataa, ayuu yidhi Madaxweynaha Uganda, laakiin ilaaliyeyaasha ayaan weli dabaaldegin
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Goob » Madaxweynaha Yugaandha ayaa yidhi waa in Kaymaha Bugoma ay sii jiraan, laakiin dadka ilaaliya deegaanka ayaan wali u dabaaldegin
Madaxweynaha Yugaandha ayaa yidhi waa in Kaymaha Bugoma ay sii jiraan, laakiin dadka ilaaliya deegaanka ayaan wali u dabaaldegin
Ka dib olole joogto ah oo ku saabsan go'aan maxkamadeed oo ah in kaynta Bugoma laga kireeyo Hoima Sugar Works bishii hore, madaxweynaha Uganda Museveni ayaa ku dhawaaqay in Bugoma kaynta ay tahay inay sii jirto.
Tani waxay daba socotaa go'aan maxkamadeed oo uu soo saaray Garsooraha Maxkamadda Sare ee Degmada Masindi, Wilson Masalu, in 6,000 hektar oo kayd ah uu leeyahay Omukama (boqorka Bunyoro), oo siinaya boqortooyada gacan xor ah si ay ugu kireyso dhulka Hoima Sugar Works si ay u koraan sonkorta.
Sida laga soo xigtay wargeyska maalinlaha ah ee New Vision, mawduuca ugu kulul wuxuu gaadhay dhegta Madaxweynaha markii Wasiirkiisa Maaliyadda, Matiya Kasaija, uu walaac ka muujiyay deeqdan shir jaraa'id oo uu ku qabtay State Lodge Masindi May 15, 2019. "Boqortooyadu way kiraysay. 22 mayl laba jibaaran ilaa Hoima Sonkor, waana la nadiifinayaa; Waa nala baabi’in doonaa, sababtoo ah kayntaasi waxay u tahay Bunyoro roob-sameeyaha,” ayuu yidhi wasiirku.
"Ma ogolaan doono in sidaas la sameeyo, waanu hubin doonaa inaan soo celino," ayuu ku jawaabay Madaxweynaha. Wuxuu ku amray dadka ku soo xadgudbay dhulka qoyan iyo keymaha dabiiciga ah inay baneeyaan ka hor inta aan laga saarin. "Waxaan ku dadaalay sidii aan u ilaalin lahaa webiga Katonga ee u dhow beerteyda Kisozi ee degmada Mbarara," ayuu yidhi.
Todobaad uun ka hor, Nature Uganda waxa ay abaabushay hadal dadwayne oo ilaalinaya rabitaanka Ururka Hawl-wadeenada Dalxiiska Uganda (AUTO) halku dhigeedu yahay “Xalka Keydka Kaymaha Dhexe ee Bugoma: Saamaynta xukunka maxkamada sare ee ah in qayb ka mid ah kaynta ay noqoto oo loo beddelay beer-sonkor.”
Dalxiisayaashu waxay ka baqayeen in goobaha dalxiiska ee dalka iyo meelaha ay ku nool yihiin shimbiraha iyo shimbiraha ay xaalufiyaan dad danaystayaal ah oo musuqmaasuq ah oo u guntaday inay kaymaha ku beddelaan cawska bakooradu.
Mid kastaa wuxuu qeylo dhaan u diray dadweynaha, oo ay ku jiraan Don Afuna Adula oo shaqada ka fariistay; kaynta Gaster Kiyingi; Frank Muramuzi, Guddoomiyaha, Ururka Qaranka ee Xirfadlayaasha Deegaanka; Achilles Byaruhanga, Agaasimaha Fulinta, Nature Uganda; iyo Pauline N. Kalunda, Agaasimaha Fulinta, EcoTrust Uganda.
Sidoo kale waxaa lagu casuumay Ronald Mwesigwa, Gudoomiyaha, Bunyoro Land Board, kaas oo loo xilsaaray in uu hawada ka nadiifiyo kaynta wax bixinta.
Waxa uu ku eedeeyay in dhulka la simay ee xuddun u ahaa deegaanka Kyangwali uu ka mid ahaa dhulkii awoowayaasha ee hantida boqortooyada ee dib u habeyn lagu sameeyay ee ka baxsan seeraha kaynta.
Isku soo wada duuboo, tartanka waxa ay kula doodeen dadka ilaaliya in xukunka maxkamada uu yahay mid ku salaysan lahaanshaha dhulka ee aysan ahayn isticmaalka kaynta.
Stephen Galima oo ka socda Maamulka Kaymaha ee Qaranka (NFA) ayaa ku dhibtooday in uu sameeyo macnaha sababta boqortooyadu ay ugu wareejinayso dhulkii awoowgood si ay u beeraan sonkorta.
Taasi waxay tidhi, kaynta Bugoma waxaa loo arkay kayn ahaan 1932-kii iyo khariidado cadastral ah iyo qorshayaasha xuduudaha ayaa diyaar u ah inay caddeeyaan taas oo ay ku jirto 6,000 hektar ee la isku haysto.
Sida uu dhigayo sharciga dhulka ee 1998, kaymaha iyo kaydadka lama damin karo haddii aan baarlamaanka la ansixin. Iyadoo ka kireynaysa kaynta Hoima Sugar Ltd., Boqortooyada Bunyoro Kitara waxay beddeshaa isticmaalkeeda dhulka taasoo asal ahaan sharci darro ah.
Afartii sano ee la soo dhaafay, Ururka Ilaalinta ee Bugoma Forest ACBF oo abaabulay roondo kaymaha ayaa mar hore la kulmay cadhada maafiyada dhirta dhirta, taas oo, sida uu sheegay Guddoomiyaha ACBF Constantino Tessarin, Florence Kyaligonza waxay go'aansatay inay lacag caddaan ah ka hesho iibka alwaaxdaan qiimo kasta ha ahaatee.
Dhammaan dadka ku nool boqortooyada Bunyoro Kitara kuma raacsana xukunka, waxaana ka mid ah wasiirka waxbarashada ee boqortooyada, Dr. Asiimwe Florence Akiiki, oo dhibaatada boqortooyada dusha ka saartay golihii wasiirrada ee hore. Kaliya sannadkii hore, Omukama ee Bunyoro, Boqorka Rukirabasaija Agutamba Solomon Gafabusa Iguru, ayaa shaqada ka eryay golihii hore ee wasiirrada oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen qaar ka mid ah xubnahooda iibinta hantida boqortooyada, xil gudasho la'aan, iyo ku takri-fal xafiiska.
Sidee bay ku heli karaan horyaalka 1-da Ogosto oo ay isla markiiba kireeyeen Ogosto 5, wuxuu la yaabay Frank Muramusi, Guddoomiyaha NAPE, oo si muuqata u xanaaqsan, isagoo u fiirsaday in isla shirkaddii doonaysay inay qaadato Mabira Forest ay hadda daba socoto Bugoma Forest, isagoo leh "qof ma seexan.”
Dib-u-heshiisiinta, khubaradu waxay kula taliyeen in boqortooyadu ay sahamiso dariiqyada kale ee dakhliga ka soo baxa kaynta oo ay ku jiraan iibinta credit credits tan iyo kaynta kaydinta saliidaha saliidda sida Tilenga ee waqooyiga iyo Kingfisher block ee koonfurta.
Isticmaalka kale ee loo soo jeediyay boqortooyadu waxay ka timid ecotourism maadaama kaynta ay ku nool yihiin chimpanzees, primates kale, iyo shimbiraha, waana marin loogu talagalay duurjoogta socdaalka ee u dhexeeya Murchison Falls National Park iyo laga bilaabo Budongo Forest oo ka sii socota ilaa Seeraha Duurjoogta Semiliki. Kaynta ayaa sidoo kale ah biyo-qabatin weyn oo harada Albert ah oo ay ka soo qulqulaan webiga Nkusi iyo qaybihiisa. Boqortooyadu waxay sidoo kale maalgelin kartaa deegaanka; Hadda Bugoma Jungle Lodge cusub waxa uu ku yaalaa kaynta laakiin si weyn ayaa loo waxyeelayn doonaa haddii kaynta aan la ilaalin ayaa ku doodaya daneeyayaasha.
Si taas loo gaaro, Joan Akiza Sarkaalka Sharciga iyo Siyaasadda, NAPE, wuxuu ku baaqay daraasad aasaasi ah oo kaynta ah, oo ku habboon Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA) si dhammaan macluumaadka loo baahan yahay si loo taageero doodooda loo helo.
Haddaba, mar haddii hadalka Madaxweynaha ka soo yeedhay, oo daba socday ballan-qaadkii uu Boqortooyadda Bunyoro u qaaday, ee ahaa in Shirkadda Hooma Sonkorta loo soo celiyo dhulkii la kireeyay, ayay dadka deegaanku la dhacsan yihiin, iyagoo ku doodaya in Shirkadda Hoima Sonkorta lagu soo oogo inay sifo sharci-darro ah ku heshay dhulkaas, haddana cashuur-bixiyeyaashu ay waajib ku tahay. fargeeto lacag aad kasbatay si aad tan u bixiso; in tani ay tahay kaliya siyaasad maadaama aan u socono olole doorasho, ayuu yiri kaynta Gaster Kiyingi.
Intii uu khudbadiisa ku guda jiray, Don Afuna Adula waxa uu arrintan ku tilmaamay “madaxweynenimo” isaga oo tixraacaya dhammaan arrimaha la isku haysto oo ku dhammaanaya in uu madaxwaynuhu u hoggaansamo ereyga ugu dambeeya.
Tuhunkoodu ma foga tan iyo markii sawirada isla cagaf-cagaf lagu qabtay deeqda kaynta Mabira ee 2007 si cad oo uu madaxwaynuhu u taageeray, si wanaagsan loo aqoonsaday inuu yahay "dambiile" isku mid ah oo ka yimid taargooyin isku mid ah iyo midab dhawaan la arkay isagoo nadiifinaya Bugoma. Sida la fahmi karo, waxaa jirta "aamusnaan cod dheer" oo ka timid xildhibaanka Honorable Betty Anywar, hore ee Madasha Isbadalka Dimuqraadiyada (FDC) ee mucaaradka iyo dhaqdhaqaaqayaasha caan ku ah u ololeynta mudaaharaadyada looga soo horjeedo bixinta Mabira Forest oo ay ku heshay magaca naanays "Mama Mabira" laakiin hadda isagoo tan iyo markaas u gudbey xisbiga talada haya ee National Resistance Movement (NRM).
Xaaladda hadda taagan ayaa ah in leyliga nadiifinta kaynta la joojiyay 1-dii Maajo maadaama NFA aysan helin ogeysiis rasmi ah iyada oo booliis xooggan la geeyay. Nasiib darro, hal hektar ayaa mar hore la nadiifiyey.
Qaar kale waxay rabaan inay kordhiyaan ololaha ay ku qaadacayaan Hoima Sugar, iyagoo og in shirkadda iska leh ee Rai International, lagu soo qaatay wax isdaba marin, siyaasad iyo cadowtooyo oo kale oo ay kula wareegeen ganacsigii alwaaxa ee dalka deriska la ah Kenya, oo markii horeba qori sigaar ah u isticmaali jiray naqshadahooda qarsoon. .
Wadanku waxa uu lumiyay 65% ​​daboolka kaynta 40-kii sano ee la soo dhaafay waxana uu sii wadaa in uu lumiyo 100,000 hektar sanadkii. Marka la eego heerkan, waa in aan la daboolin kayn 20 sano gudahood. Saamaynta isbeddelka cimilada ayaa durba la dareemaya oo ay ka mid yihiin Madaxweynaha oo laftiisu ah xoolo-dhaqato aad u adag; qaar baa nasinaya ilaalinta.
dhaawac Maxkamadda Maaliyadda Xayawaanka Forum for Democratic Change Kingfisher Kaynta Mabira Mbarara Park Murchison Falls National Park Dhaqdhaqaaqa iska caabinta Qaranka Nature Siyaasadda Uganda Duurjoogta
Neste iyo Air BP waxay shidaal duulimaad waara ku keenayaan garoonka diyaaradaha Caen ee ku yaal Faransiiska
FAA waxay uga digeysaa shirkadaha duulimaadyada “khalad xisaabeed ama aqoonsi xumo” halista ka jirta Gacanka Beershiya
Saamaynaha safarka waxaa dacweeyay Travelers United...